မွတ်ဆလင် ဖက်ကလိုက်ပြီး သတင်းမှားများ လုပ်ကြံဖော်ပြသဖြင့် ဘီဘီစီကို ရခိုင်သားများ ထပ်မံ ဆန္ဒပြအုံးမည် ~ Myanmar Express
မွတ်ဆလင် ဖက်ကလိုက်ပြီး သတင်းမှားများ လုပ်ကြံဖော်ပြသဖြင့် ဘီဘီစီကို ရခိုင်သားများ ထပ်မံ ဆန္ဒပြအုံးမည်
အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေရော၊ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်လစ် များက ရေးသားတဲ့ သတင်းတွေရော အားလုံး ပြည့်နေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘီဘီစီ အမှန်တရားကို သိသိကြီးနဲ့ အောက်တန်းကျစွာဖြင့် သတင်းမှားများကို ရေးသားနေတာကြောင့် ရခိုင်သားတို့က ဘီဘီစီကို ထပ်မံ ဆန္ဒပြကြမယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ဘီဘီစီရဲ့ စာမျက်နှာမှာ မြန်မာ လူမျိုးများ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် မြန်မာစာမျက်နှာမှာ တမျိုး ရေးသားထားပြီး အင်္ဂလိပ် စာမျက်နှာတွင် Burma police clash with Muslim protesters in Maung Daw ပြီး လုပ်ကြံရေးသားထားပါတယ်။၎င်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွတ်ဆလင် တို့၏ မီးရှို့ခြင်း၊ ဆိုင်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း ခံနေရသော ရခိုင်ပြည်သူများသာ မြန်မာ ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးကပါ ဘီဘီစီကို မကျေနပ်ဖြစ်နေကြပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံးမှာလည်း ဆန္ဒပြကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းမူရင်းလင့်က ဒီနေရာ မှာပါ ဒါ့အပြင် ဘီဘီစီ ရဲ့ သတင်းနောက်တစ်ခုမှာလည်း ရိုအင်ဂျာ ကို မြန်မာ လူမျိုးဆိုပြီး ထပ်မံ ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။ Desperate plight of Burma's Rohingya people ဟုရေးသားထားပါတယ်။ ယခင်တုန်းကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုအင်ဂျာပြည်နယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့လို့ ရခိုင်ပြည်သူ အများအပြားက ဘီဘီစီကို ဆန္ဒပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒီနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကုလား - ရခိုင် အဓိကရုဏ်း ရဲ့ အဓိက တရားခံ ကလည်း ဘီဘီစီ နဲ့ ပြည်ပ အခြေစိုက် သတင်းဌာန များ အားလုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူအားလုံးက လက်ခံထားပြီး ပြည်ပတွင်နေထိုင်ပြီး လစာကောင်းကောင်ယူကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ကို ဖိနိပ်ရေးသားနေသော မြန်မာဝန်ထမ်းများကို လူထုတစ်ရပ်လုံးက တင်းမာနေကြောင်း သိရပါတယ်။ မူရင်းလင့်က ဒီနေရာ မှာပါ ပထမ အကြိမ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုအင်ဂျာ ပြည်နယ်လို့ ရေးသားခဲ့သူ အန်နာဂျုံး နဲ့ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှာ လစာယူပြီး အလုပ်လုပ်နေသူ မြန်မာများကို သတင်းပြင်ပေးဖို့နဲ့ သတင်းမှားအတွက် တောင်းပန်ဖို့ လန်ဒန်မြို့ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန ရှေ့မှာ ရခိုင်နှင့် အခြား တိုင်းရင်းသား ၅၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ အခကြေးငွေယူပြီး သတင်းရေးနေသူ များက တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို၊ အန်နာဂျုံးကလည်း တောင်းပန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဘီဘီစီ ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ မြန်မာတွေ ကွန်းမန့်ပေးလို့ မရအောင်လုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု တစ်ကြိမ်မှာတော့ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ ရခိုင်လူထုက ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှ သံရုံးမှာ ဆန္ဒပြမယ်လို့ သိရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာပဲ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့အပေါ် လုပ်ကြံဖော်ပြနေတဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန အခြေစိုက်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် အထူး အဆင်ပြေသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မြန်မာစကားမပြောတတ်သော သား နှစ်ယောက်၊ မြန်မာလူမျိုး လုံးဝ မဟုတ်သော ချွေးမ နှစ်ယောက်နဲ့ မြေးများကို သွားတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်ချင် ပြောချင်သူ ဖြစ်ပြီး မြန်မာအချင်းချင်းတောင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်သူ ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို ဘီဘီစီက ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရခိုင်နဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ဖက်က ရပ်တည်ပေးခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန ကို ရခိုင်းသားတို့ ဆန္ဒုပြခဲ့သည့် သတင်းများကို http://www.myanmarexpress.net/search/label/%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%AE%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9 မှာ ဆက်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ်,လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာသမားများ,သတင်း
9 June 2012 17:32
ကျွစ်...ဒေါ်စုက အနောက်အုပ်စုကို လွန်ဆန်နိုင်ပုံမရဘူးဒေါ်စု ဘာလဲ ဘယ်လဲ..ကျနော့်ယုံကြည်မှုတွေ သဲထဲရေသွန်လားးး :'(
9 June 2012 20:25
When ? Let us know.
17 June 2012 07:59
All Rakhine and Myanmar people in the World must protest in front of all BBC offices in the World . If so, World people will know that BBC is liar about Rohingya.
ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှ အကြမ်းဖက်မှု ...
ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးရ မောင်တောမြို့နယ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပု...
အမေအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရခိုင်သားလေးတစ်ယောက်၏ ရင်တ...
မောင်းတောတွင် မွတ်ဆလင်များ၏ မီးရှို့မှု၊ ဖျက်ဆီးမှုြ...
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူကုန်ကူးမှု ၁၂၀ မှု ဖော...
8-6-2012 နေ့ စစ်တွေတွင် ကုလားများတိုက်ခိုက်ခံရသူမျ...
ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပြဿနာ များဖြေရှင်းကြရာတွင်
ရို ဟင် ဂျာ က မြန်မာ လူ မျိုး လား(ပေးစာ - ၁၄၇)
ကုလားရန်ကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသော ရခိုင်မိသားစု (ဗွီဒ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ ဆူပူ အကြမ်း ဖက်မှုများ...
မွတ်ဆလင် ဖက်ကလိုက်ပြီး သတင်းမှားများ လုပ်ကြံဖော်ပြ...
မောင်တောမြို့တွင်း စစ်တပ်များရောက်လာပြီး ပိတ်မိနေသ...
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂
ညမထွက်ရ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂
နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေ...
ဘင်္ဂလီကုလားများ စစ်တွေမြို့ရှိ မင်းဂံရွာကို ၀င်ရောက...
ကုလား ဖင်ရက်များ နှင့် တာဝန်မဲ့သူများ
ယနေ့ည မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ ယုတ်မာမ...
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ ကို မီးရှို့မည်ဟု သတင်းများ ...
မောင်းတောမြို့ ကို မထိန်းနိုင်တော့
အလ်ကိုင်းဒါး မှ သတိပေးစာ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စာသင်ကျောင်း (၅) ကျောင်း နှင့် ဘု...
ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ က မြန်မာ ထက် အဆ များစွာ သာတော့မည်
စင်္ကာပူအစိုးရကိုလည်း ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း လမ်းလျှော...
ဇွန် ၁ ရက်မှ စပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံအား ရန်...
ရခိုင်မလေး တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စာ
ဌာနေမဲ့ပြည်သူများအား မှတ်ပုံတင်ကတ်များ စတင်ထုတ်ပေး...
မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်းတန် ထွက်ရှိတော့မည်
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ် (သို့) ကုလားပြည်...
ကုလားထိ ၍ နာကြ သူများ
၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတော့ ကောင်တွေကို တခုတော့မေးချင်တယ်
နည်းပညာကျောင်းသားများကို အကုန်သတ်ပစ်မည်ဟု ချိန်ြးေ...
၈၆ နှင့် စသည့် ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများကို ကြိုတင်ငွေ...
တပ်မတော် အစိုးရက မ အုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် မှုခင်းဖြစ...
ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဈေးက...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရာထူးမှ န...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အသံ...
မွတ်ဆလင်တချို့ သံတွဲမြို့ ဂျီတီအိုင်ကျောင်းကို ခဲန...
မြန်မာမိန်းကလေးတို့ရေ အမျိူးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရ...
မလေး မှ သူငယ်ချင်းများ ဖုန်းဝယ်မယ် ဆိုရင်
NLD နာယက ဦးတင်ဦးအား ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင် ၀ါကာအူးဒင်းက ...
မြန်မာမီဒီယာတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုက ဘာလဲလို့ မေးချင်တယ်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၄ နာရီ မီ...
ကလေးငယ်များ အသုံးပြုနိုင်မည့် ဆိုက်သစ်တစ်ခု Facebo...
ဧရာဝတီဒေသတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန...
မသီတာထွေး သားမယားပြုကျင့် အသတ်ခံရမှု၊ မူဆလင် (၁၀)ဦ...
ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော မင်းမဲ့စရိုက် လူသတ်မှုများကြော...
မွတ်ဆလင် ကုလားများ သတိထားရန် မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော...
ကေအိုင်အေ(ကချင်) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ အကြောင်း မဲ့ပစ်...
စစ်တွေမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရပ်မှန...
သင့်တော်သော အချိန်ရောက်ပါက လွှတ်တော်ရှိ တပ်မတော်သား...
ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ Website တစ်ခု မှတဆင့် သတင်းတ...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်း ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ...
KIA ရဲဘော်များ ထွက်ပြေးလျက်ရှိ
ဆော့လော်တွင် KIA မှတပ်သားသစ်ရက်တိုသင်းတန်းဖွင့်ရန်...
ပြည်သူလူထုကို ထမင်း မကျွေးနိုင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ အစ...
KIA အဖွဲ့အတွင်း ဘာသာရေးကြောင့် သဘောထားတင်းမာနေ
မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ .....(ပေးစာ - ၁၄၆)
Homs မြို့တွင် သတင်းထောက် နှစ်ဦး အသတ်ခံရ
ကုန်သေတ္တာကား၊ သစ်လုံးတင်ကားနှင့် ကုန်တင်ကားကြီး ၃၀...
KIA မှ ဆိပ်မူရွာသို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်၍ လူ ၁ဦး...
လက်ဝှေ့ကျော် မိုက်တိုင်ဆန် မြန်မာနိုင်ငံ သို့လာမည်...
ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဆုံးမနေပြီ(ေ...
အင်းတော်ချောင်းကူးတံတားအား KIA မှ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင...
ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်...
နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အငြင်းပွားမှုများ မြန်မာနိုင်...
၂၁ ရာစု ရန်ကုန်မြို့ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး မဟ...
Myanmar Payment Union ကတ် ဇူလိုင်တွင် အသုံးပြုနိုင...
ဆီးဂိမ်းမတိုင်မီ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်သွ...
ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရေး ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ သံ...
Yangon Trade Exhibition & Car Expo ပြပွဲ တွင် ကားက...
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ဝါရှင်တန် မိန့်ခွန်း (အပြည့်အစုံ - အသံဖိုင်)
အမေရိကရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လာကြဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ခေါ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့ စနေနေ့မှာ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ခရီးရောက်မဆိုက်မှာပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေ အမိမြေကို ပြန်လာပြီး ...
မေလ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီခန့်တွင် ပအို့ဝ်အမျိုးသားတပ်မတော်(PNA)မှ လက်နက်ကိုင်ဦးရေ ၃၀ ခန့် သည် ဒုတိယ အကြိမ် အဖြစ် တောင်ကြီးမြို့နယ်ေ...